Ama-luminescence ekuzamazameni komhlaba, izindawo ezikhuphukayo kanye nesixwayiso sokuqala | Isimo Sezulu Senethiwekhi
AmaLuminescence kuzamazama komhlaba, izindawo zeRift kanye nesixwayiso sokuqala
UDavid melguizo | | Ciencia, Isimo sezulu, Isimo Sezulu Senethiwekhi
Imiphumela yokuzamazama komhlaba kwe-L'Aquila
Ukutadisha nokwakhiwa kwekhathalogi entsha ye-luminescence ku ukuzamazama komhlaba (ukukhanya okungaqondakali okuye kwabikwa ngaphambi nangesikhathi sokuzamazama komhlaba) kunqume ukuthi ezimweni eziningi kuhlobene nezindawo zeRift, lapho umhlaba uhlukana khona. Ucwaningo esibhekise kulo bekungelokugcina ukubhekana nalezi zibani eziyindida, ezichazwe ngofakazi bokuzibonela amakhulu eminyaka asasele namuhla ngaphandle kwencazelo ephelele yesayensi.
Lo msebenzi, okhishwe yi Izincwadi Zocwaningo Lwezesayensi, kusungula imigqa eminingana yophenyo ukuthola indlela okwakhiwa ngayo la malambu. Ababhali basikisela ukuthi amandla amadwala ashayisanayo phakathi nokuzamazama komhlaba enza ukuthi kugeleze ugesi. Lokhu kukhishwa kuphakama ngamaphutha amile noma ashubile, ajwayelekile ezindaweni zeRift. Lapho zifinyelela phezulu, zithintana nomoya osemkhathini, zikhiqize ukusabela okudala ukukhanya.
Izibani ezihlobene nokuzamazama komhlaba ziyizinto ezingokoqobo, akukho mandla angaphezu kwavamile (UFO, ubuthakathi, njll.) Okuzikhiqizayo, futhi zingachazwa ngokwesayensi. Yize vele osukwini lwakhe ngisho u-Iker Jiménez wanikezela uhlelo oluphelele ku- «Earthquakes and luminaries».
Okokuqala yiba nokungabaza
Enye yezinkinga zokutadisha amalambu ahlobene nokuzamazama komhlaba ukuthi imibiko eminingi ihlobene neMarginal and even Paranormal Sciences. Abanye ofakazi bakhuluma ngamalangabi kanye nama-jets wentuthu aqhamuka emhlabeni, amanye amafu akhanyayo angaba yi-auroras, noma imisebe yomlilo wasezulwini okungaba yi-meteorites.
Kepha imibiko eminingi ayinakuchazwa kalula. Isibonelo, eNew England, indoda ethatha ukuhamba nenja yayo ngo-Okthoba ntambama yezwa umhlaba uqala ukuzamazama futhi wabona ibhola lokukhanya lidlula phezu kwalesi silwane, esaqala ukuhhewula.
Ukuxakaniseka kwenkambu kusho ukuthi, yize kunentshisekelo enkulu yokwazi kabanzi mayelana nokukhanya okungajwayelekile, akuyona indawo efundwe kakhulu ngoba cishe akunakwenzeka ukwenza izivivinyo ngayo.
Ithimba lososayensi linqume ukuqoqa yonke imibiko abangayithola, kusukela ngo-1600 kuze kube namuhla. Bathola ukuzamazama komhlaba okungama-27 okutholakala eMelika kanye nama-38 eYurophu, lapho kukhanya khona ukukhanya okukhanyayo kwakufanele kucatshangelwe, okwakubonakala kuqoqwe ngezindaba ezingaziwa.
Ku- ugu lwasePeruviaNgo-Agasti 2007, umdobi wabika ukuthi isibhakabhaka saphenduka saba nsomi imizuzu embalwa ngaphambi kokuba ulwandle luqale ukuzamazama. Eduze nase-Ebingen, eJalimane, ngoNovemba 1911, owesifazane othile wabika ukukhanya okuhamba emhlabathini njengezinyoka ngaphambi nje kokuba kunyakaze.
Kokuzamazama komhlaba okungama-65 okwacwaningwa, okungama-56 kwenzeka ezindaweni ezisebenzayo zeRift. Futhi ezingama-63 kwezingama-65 zenzeke ezindaweni ezinamaphutha asondele mpo, ngokungafani nama-engeli athambile ahlobene namaphutha amakhulu.
Lokhu kuthambekela kungachaza ukuvela kwamalambu, kusho uTheriault nozakwabo, ababhekele elinye lamagatsha ocwaningo. Elinye ilungu laleli thimba, uFriedemann Freund, isazi sezimbiwa e-Amasa Reseach Centre yeNASA eMoffett Field, eCalifornia, usola ukuthi konke lokhu kuqala ngokuthi iziphene edwaleni, lapho ama-athomu e-oksijeni akhona esakhiweni samakhemikhali samaminerali alahlekelwa yi-electron.
Lapho amandla akhiqizwa ukuzamazama komhlaba efika edwaleni, aqhekeza izibopho ezibandakanyeka kulokhu kungafani, kudale izimbobo zokushaja okuhle kagesi. Lezi izimbobo p zingagudlukela phezulu zibheke phezulu ngephutha, zibangele izinkambu ezinamandla zikagesi ezingakhipha ukukhanya.
Ukukhama okukhulu, kusondela elabhorethri
Ukuhlolwa kwelabhorethri kukhombisile ukuthi izinkambu zikagesi zingenziwa ezinhlotsheni ezithile zamatshe ngokuchotshozwa. Kodwa umqondo kaFreund ungenye yezindlela eziningi ezingachazwa zokukhanya okwenziwe ukuzamazama komhlaba.
Ikhathalogu etholakele iphakamisa eminye imibono yokufundwa kwalezi zibani, kusho uTheriaul. Isibonelo, ososayensi abafunda amaphutha asebenzayo bakwazile ukubona izinguquko ekusebenzeni kukagesi komhlaba ngezikhathi zangaphambilini nangesikhathi sokuzamazama.
Ngokuvamile, uma sibheka izibani ezihlobene nokuzamazama komhlaba emhlabeni wonke, singasho ukuthi zingasixwayisa ngokuzamazama komhlaba njengesixwayiso sokuqala kokuzamazama.
Le nto isivele inezandulela ezisebenza njengesixwayiso kubantu. Isibonelo, ngaseL'Aquila Italia ngo-Ephreli 2009, indoda yabona ukukhanya okukhanyayo okumhlophe okuqhamuka emakhabetheni ayo asekhishini ekuseni kakhulu yase ibeka umndeni wayo endaweni ephephile. Ngemuva kwamahora amabili, kwaba lapho ukuzamazama komhlaba okwadala umonakalo sonke esasizwile ngakho.
Mhlawumbe kufanele kubhekwe ukugxila kakhulu kulolu hlobo lwesimo futhi kunqunywe ngezifundo eziphelele uma zingasebenza njengesixwayiso sokushaqeka.
Imininingwane engaphezulu: Ukuzamazama komhlaba okuqinile okubulala okungenani ama-75 eChina, Ukuzamazama komhlaba okungu-6,0 kuzamazamise iPeru
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » AmaLuminescence kuzamazama komhlaba, izindawo zeRift kanye nesixwayiso sokuqala
Amandla we-geothermal. Izindlu zokugcina izithombo kanye nesicelo sazo kwezolimo
Imephu Yomoya Yomhlaba, ibalazwe lesimo sezulu eliluthayo nelisebenzisanayo